12 -ka ugu wanaagsan ee ku -dayayaasha NES ee Windows 10 | Madasha Mobile -ka
Ignacio Sala | | Barnaamijyada
Waad ku mahadsan tahay emulators, waxaan xusuusan karnaa waqtiyo kale oo nolosheena ah, illaa iyo inta aanan gacanta ku haynin consoles -kii asalka ahaa (wax aan macquul ahayn haddii aynaan ahayn kuwa wax aruuriya). Mid ka mid ah consoles -kii ugu horreeyay ee caan noqday wuxuu ahaa Nintendo Entertainment Nidaamka, oo loo yaqaan NES.
Wali waa suurtogal in suuqa laga helo noocyadan consoles -ka ah, waxay u badan tahay in qiimaha ay dalbadaan iibiyaasha qaarkood ay xad dhaaf yihiin. Xalku, sidaan kor ku sheegay, wuu maraa isticmaal emulator, Windows 10 oo ah madal ugu fiican sababtuna tahay tirada badan ee xulashooyinka jira.
Ahaanshaha mid ka mid ah consoles'ka ugu caansan ee waqtiga oo dhan, tirada emulators -ka la heli karo aad bay u badan yihiin. Haddii aad rabto inaad ogaato maxay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee ku dayashada NES ee Windows 10, Waxaan kugu martiqaadayaa inaad akhriska sii wadato.
Haddii aan ka hadalno emulators, waa inaan ka hadalnaa RetroArch. RetroArch ayaa noo oggolaanaysa ku raaxayso qaanso kasta oo la sii daayay. Iyada oo loo marayo codsigan bilaashka ah oo dhammaystiran, waxaan ku raaxaysan karnaa PSP, GameBoy, Sega Saturn, Master System, Nintendo Wii games ...
Is -dhexgalka adeegsadaha ee barnaamijkan waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid aad u fudud in la isticmaalo mar haddii aan rakibnay tusaalayaal aan rabno inaan isticmaalno, maadaama codsiga laftiisa kuma jiraan taageero midna. Codsigu wuxuu leeyahay shaqaynta netplay oo noo oggolaanaysa inaan abuurno shabakad maxalli ah si aan ugu ciyaarno qaab -dhaqameedka dadka badan.
Haddii aadan dooneynin inaad noloshaada ku adkeyso adduunka murugsan ee emulators guud ahaan, iyo gaar ahaan NES, RetroArch waa meesha laga bilaabo. Markaad u habeyso arjiga sidaad jeceshahay, waa inaad ku dartaa emulators -ka iyo ROM -yada si aad mar kale ugu raaxaysato sidii markii aad yarayd.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu raaxeysto ciyaaraha NES, ayaan ka helnaa Jen, emulator ah in uu yahay lagu turjumay in ka badan 20 luqadood, sidaa darteed haddii Ingiriisigu uusan ahayn waxaaga, waa inaad siisaa emulator -kaan tijaabinta, emulator -ka oo diiradda saaraya la jaan -qaadka ciyaaraha Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, in kasta oo noocyo badan oo Jabaaniis ah ay sidoo kale shaqeeyaan.
Sida RetroArch, Jnes waa diyaar u ah Windows 10 iyo Android, taas oo noo oggolaanaysa inaan ku raaxaysanno cayaaraha konsolekan meel kasta oo aan joogno. Codsigan wali wuxuu ku jiraa horumar joogto ah, sidaa darteed waxay u badan tahay in inta la isticmaalayo aad la kulmi doonto cillad, in kasta oo aan caadi ahayn.
In kasta oo aan la cusbooneysiin in ka badan 3 sano, VirtualNES Waa mid caan ka ah adduunka ku -dayashada magacyada NES. Codsigan asalkiisu yahay Jabaan, wuxuu xusuustaa waqtigaas oo muujinaya cayaaraha qaab dhismeedka telefishankii hore. Waa Netplay ku habboon, markaa waxay noo oggolaanaysaa inaan saaxiibbada kale kula ciyaarno shabakad maxalli ah.
Waxay ku habboon tahay xeerarka khiyaamada, ugu badnaan 4 kontaroole ayaa lagu xiri karaa, waxay noo oggolaaneysaa inaan dejino tiro jaantusyo ilbiriqsi kasta iyo hawl kasta oo kantaroolka iyo konsole ah waxay leedahay badhankeeda keyboard -ka loo qoondeeyay. Looma baahna kombiyuutar aad u awood badan si uu awood ugu yeesho fulinta cinwaannadaas laakiin waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo nooca ugu dambeeya ee DirectX ee la heli karo.
Kalkaaliye waa a isha furan ee NES emulator taasi waxay ahayd horumar tan iyo 2004. Si ka duwan kuwa kale ee ku dayashada leh, waxaan u baahanahay kombiyuutar si cadaalad ah u xoog badan waxaanan dooneynaa in ciyaaruhu ku socdaan xawaare aad u sarreeya, ikhtiyaar u badan kuwa ku dayashada leh ee aan ku tusinno maqaalkan la'aanta.
Emulator -kani wuxuu bixiyaa iswaafajin buuxda oo leh xeerarka Game Genie iyo kontaroolada la hagaajin karo. Waxay kaloo noo oggolaanaysaa qaado fiidiyowyada ciyaarahayaga ee qaabka AVI waxaana ku jira khalad -khafiifiyaha isticmaalayaasha horumarsan. Uma baahna oggolaansho maamule si uu u shaqeeyo, maadaama ay taageerto kaydinta xogta ee RAM.
Emulator-ka FCEUX Waa afar mid mid, maadaama aysan kaliya awood u lahayn inay cayaarto ciyaaraha NES, laakiin sidoo kale, waxay noo oggolaanaysaa inaan ku raaxaysanno cinwaannada Famicon, System Disk System iyo Dendy. Emulatarkaani gabi ahaanba waa bilaash, waxaa ku jira taageero dhammaan gobollada wuxuuna taageeraa qaababka NTSC, PAL iyo NTSC-PAL.
Codsigan waa ikhtiyaar aad u fiican ciyaaraha tijaabinta oo aan waligeed laga sii dayn meel ka baxsan Japan. Waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay khaldan oo jabiyaan ROMS, ku abuuraan khariidado iyo qoraallo Lua.
Nestopia Waa mid ka mid ah emulators ugu horeysay in ay ku dhufteen suuqa. In kasta oo ay cimri dheer tahay, soo -saareyaasha emulator -kan ayaa sii wadaya ilaa maanta, waxay la jaan qaadi kartaa Windows iyo macOS iyo Linux labadaba.
Nooca ugu casrisan waa fargeeto koodhkii asalka ahaa waxaana ka mid ah kor -u -qaadis iyo taageeridda aaladaha kale. Tani had iyo jeer waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu jecel emulators ee adeegsadayaasha NES, sidaa darteed waa war aad u fiican in la ogaado inay sii waddo cusboonaysiinta sida maalinta koowaad.
RockNES waa emulator ku habboon dadka isticmaala koox ay maamulaan Windows XP, ME iyo xitaa Windows 7 iyo 8, mar haddii aan la cusbooneysiin muddo. Waxay leedahay astaamaha ku -dayashada aasaasiga ah waxayna abuurtaa faylka qaabeynta oo beddeli kara codka, fiidiyaha, iyo taageerada xakamaynta.
Haddii aad haysato kombiyuutar uu maamulo nidaam hawlgal oo casri ah, sida Windows 10, waa inaadan ka fikirin emulatorkan. Laakiin, haddii aysan sidaas ahayn, ama aad rabto inaad kombiyuutar duug ah u rogto konsole, emulator -kan ayaa ku habboon hawshan.
Emulator-ka SNES9x Waa xulashada ugu fiican ee lagu daydo ciyaaraha Super Nintendo (SNES) iyo Super Famicon daaqadaha (waxay ku habboon tahay Windows XP), macOS, Linux iyo Android. Emulator wuxuu dhashay dabayaaqadii 90meeyadii maantana wuxuu sii wadaa inuu helo cusbooneysiin.
Emulator Tani waxay bixisaa taageero SNES kulan la NTSC, PAL, iyo NTSC-PAL. Waxay ku habboon tahay ciyaarta magacyada aan ka soo bixin Japan, waxaa lagu calaamadeeyay C ++, waxaa ku jira saddex xabbadood oo emulator CPU ah oo ku jira isku -duwaha.
Marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan ku dayanno ciyaaraha NES, sidoo kale waxay taageertaa SNES, Genesis, Game Boy Advance iyo Game Boy horyaal. Waxay leedahay nidaam badbaadin, ciyaartoy badan oo maxalli ah iyo suurtagalnimada in lagu meeleeyo badhamada xakamaynta.
NESBox waa emulatorka kaliya ee NES ee ku jira liiska uma baahna inaad soo dejiso fayl markaa waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo kombiyuutarrada leh kayd yar, haddii aadan rabin inaad ku buuxiso ROM -yada cinwaannada aad ugu jeceshahay.
Bizhawk waa emulator loogu talagalay in loo isticmaalo skuwa da 'yarta ah iyo ciyaartooyda kale ee tartamada maamula si aad u aragto cida ku dhammeysa ciyaaraha waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Si aad u awooddo inaad isticmaasho emulator -kaan, waxaa lagama maarmaan ah inaad leedahay aqoon ku dayasho maadaama marwalba loo baahan yahay qashin -qubka qalabka si nidaam kasta u isticmaalo si sax ah.
BizHawk wuxuu taageeraa faylka NES, Nintendo 64, PlayStation iyo Sega Saturn. Waa emulatorka ugu fiican dhammaan noocyada nidaamyada haddii aadan ka fikirin inaad lumiso waqti yar si aad si sax ah ugu habayso. BizHawk waxaa si ballaaran u adeegsada kuwa orodka dheereeya ee ciyaaraya Nintendo 64 ciyaarood oo ku tiirsan cilladaha si ay horumar uga gaaraan tartanka.
Iyada oo loo marayo mareegtooda, waxaan haysannaa a madal aan kaga jawaabi karno su'aalo kasta naloo soo bandhigay markii aan isku hagaajinaynay arjiga markii hore.
Mesen NES Emulator waxaa lagu gartaa inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu saxsan ee isku -dubaridka EES emulators, maadaama ay bixiso waafaqsanaanta sare leh inta badan cayaaraha, kaliya maahan NES, laakiin sidoo kale waxay ka timid Famicon, Nidaamka Disk Famicom, Dendy iyo kuwo kale.
Iyada oo emulator this, waxaan awoodnaa badbaadin horumarka ciyaarta, dib u celi ciyaarta, duub ciyaarahayaga, waxay bixisaa taageero khiyaamada Game Genie. Faylasha leh ROM -yada lagu cadaadiyey qaabka zip uma baahna in la kala furfuro si ay u awoodaan inay ku raaxaystaan, taas oo noo oggolaanaysa inaan meel ku kaydsanno diskka labada.
Emulator Tani waa mid ka mid ah ugu yar suuqaSi kastaba ha noqotee, sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran ee aan hadda ka heli karno adduunka emulators -ka Nidaamka Madadaalada Nintendo (NES) iyo Kumbuyuutarka Qoyska (Famicon), sidii looga yaqaanay inta badan waddamada Aasiya.
Ugu dambayn liiskayaga kuwa ugu wanaagsan ee ku -dayayaasha NES waa emulator -ka hoomboro. Inkasta oo markii hore loogu talagalay ku dayda magacyada Wii iyo GameCube hadda waxay sidoo kale noo oggolaaneysaa inaan ku raaxeysanno cinwaannada NES, Game Boy Advance,
Dolphin waa emulator marinka iskutallaabta, kaas oo noo oggolaanaya inaan ku raaxaysanno labadaba Windows, macOS iyo Android. Marka laga hadlayo shaqooyinka, waxaan la mid nahay kuwa ay soo bandhigtay RetroArch, oo ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee ku dayasho mudan suuqa.
Emulaha Dolphin wuxuu bixiyaa heer sare waafaqsanaanta inta badan magacyada ciyaarta NES ee gobol kasta. In kasta oo habka rakibidda uu u ekaan karo mid aad u adag, annaga oo kaashaneyna waxaan ka helnay degelkiisa iyo dulqaad yar, waxaan howsha ku fulin karnaa dhibaato la'aan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Top 12 NES Emulators ee Windows 10
Sida loo iftiimiyo fiidiyowga barnaamijyadan bilaashka ah